Biby totohondry: toetra, karazany, fonenana ary fitondran-tena | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 28/07/2021 09:51 | Tontolo_iainana
Ny fahitana tsara sy ny fandrosoana biby totohondry Izy ireo dia karazana mpiady mailaka, fa ny tena zava-dehibe dia fetsy. Misy karazana fahasamihafana 40 eo ho eo izao, eo anelanelan'ny biby lehibe sy biby hafa heverina ho biby fiompy. Ny fandinihana dia naneho fa avy tamin'ny vanim-potoana Oligocene izy ireo, niova avy tamin'ny fianakavian'ny biby mampinono miacal tamin'ny vanim-potoana Paleocene sy Eocene, nisy nandritra ny 32 tapitrisa taona teo ho eo. Ireo biby ireo dia manana toetra mampiavaka tena mahaliana handinihina.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny biby dia, ny toetrany ary ny fomba fiainany.
1 Karazam-biby biby madinidinika
2 Fomba fiasa lehibe
3 Famokarana sy toeram-ponenan'ny biby lavalava
4 Saka an-trano
Karazam-biby biby madinidinika
Betsaka ny santionan'ny vainga nifindra tany Eropa sy Azia. Tamin'ny faran'ny Miocene dia efa nisy karazam-bikan-tsarimihetsika marobe, anisan'izany ireo nify antsoina hoe saber. Ny kely indrindra dia afaka nifindra monina namaky an'i Afrika sy Amerika.
Lafiny iraisan'ny biby lavalava rehetra ny faniriany mpiremby. Saika tsy azo atao ny manintona biby maty ny remby. Tian'izy ireo ny manenjika ny sakafony mandra-pitan'izy ireo ny vozony ary mamono azy ireo amin'ny fomba marina.
Ireo karazana biby dia tsy mitovy amin'ny biby fiompy sy ireo mipetraka amin'ny faritra midadasika, toy ny liona sy tigra. Avy amin'ny firazanana samihafa izy ireo ary samy manana ny mampiavaka azy. Andao hojerentsika hoe inona ireo vondrona singa lehibe indrindra amin'ny biby dia:
Felis: misy lynx, saka bibidia, saka saka, karnivora, saka sy saka amam-borona amin'ny ankapobeny. Ny habeny dia mety miovaova kely na kely.
Neofelis: Ny mpitarika tsy azo iadian-kevitra amin'ity vondrona ity dia ilay panther rahona, izay misy ifandraisany amin'ny saka, na dia lehibe kokoa aza izy io.
Acinoyx: Voasokajy ao amin'ity tsipika ity ny karazana cheetah rehetra.
PhanteraJaguars, liona, tigra ary leoparda tafiditra ao amin'ity sokajy ity.
Cougar: Pumas sy antsoina hoe "saka mena" ihany no tafiditra amin'ity sokajy ity.
Ny mpikambana ao amin'ny karazana Panthera no saka lehibe indrindra manerantany. Ny vatany matanjaka, ny nifiny maranitra ary ny homboany matanjaka dia mamela azy ireo hihinana biby lehibe toy ny serfa, lambo dia ary ny voay mihitsy aza. Ity farany ity dia malaza be amin'ny adiny amin'ny tigra lavalava lehibe indrindra eto an-tany. Io no tadiny lehibe indrindra eto an-tany, milanja hatramin'ny 300 kg.
Saika ny saka lehibe rehetra dia monina any Afrika sy Azia atsimo, miaina ny savannah na ny ala mikitroka. Ny jaguar irery no maningana. Ankoatra ny leoparda misy lanezy izay mipetraka amin'ny faritra be tendrombohitra any Azia Afovoany, dia fantatry ny biby rehetra. Izany dia vokatry ny lokony fotsy manokana, izay mamela azy hiova endrika amin'ny lanezy.
Boribory ny lohan'ny biby madinidinika ary ny saosiny fohy dia mifarana amin'ny saokany matanjaka. Ny tadiny sy ny moliriny dia matetika kely noho ny antony iray: mila toerana malalaka ny canine mahery satria ireo no canine ampiasaina matetika indrindra hamitana ny fihazonana azy. Felines dia afaka mamerina miala ny tongony araka ny sitrapony, izay manakana azy ireo tsy ho reraka mandritra ny dia. Na izany aza tsy ny rehetra no mahavita azy. Ny tsipika tokana izay tsy manana an'io toetra io dia ny cheetah, izay mampiasa ny tongony hihanika hazo ary hiala sasatra.
Ny karazana volo dia miankina amin'ny karazany sy ny toeram-ponenany. Matetika ny tigra dia mipetraka amin'ny ala maitso midadasika sy maina ary tototry ny tany, noho izany ny loko volomboasary mahazatra azy dia manamora ny fanafenana azy ary tsy nahatratra trondro tsy ampoizina. Etsy ankilany, jaguar dia mpihaza alina lavorary satria ny lokony mainty dia azo ampiasaina ho camouflage.
Ny lanjany sy ny haben'ny felines dia mety miovaova be. Ny sasany mety hahatratra telo metatra sy sasany ny halavany na milanja hatramin'ny 280 kilao. Ny kely indrindra dia saka saka.
Noho ny fahatsapany saina dia mpihaza izy ireo. Nandritra ny taona maro, ny fivoaran'izy ireo ara-maso sy fandraketana dia nahafahan'izy ireo nahita babo sarotra. Zava-dehibe koa ny hafainganam-pandehanao. Misaotra azy, Afaka misambotra sakafo haingana koa izy ireo, miaraka am-boho maranitra sy valanoranony matanjaka. Ny zava-misy hafahafa dia ny liona liona ihany no mihaza ao anaty vondrona, satria avy eo afaka manafika ny rembiny izy ireo mba hisambotra azy.
Famokarana sy toeram-ponenan'ny biby lavalava
Tsy mijanona ela ny lehilahy sy ny vehivavy. Ampy ny fanambadiana. Toy ny biby hafa, ny saka lahy dia lehibe kokoa noho ny vehivavy ary, amin'ny lafiny roa, dia mahatratra ny fahamatorana ara-nofo ao anatin'ny dimy taona. Manokana, Ny liona dia mavitrika tokoa amin'ny fiainam-pananahana, noho izany dia mifanambady amam-behivavy imbetsaka isan'andro izy ireo mandritra io fotoana io.
Ireo biby ireo dia niely nanerana an'izao tontolo izao, na dia mety hiseho amin'ny toerana be zavamaniry sy mora miditra amin'ny sakafo aza izy ireo. Afaka miaina tsara any an'efitra koa izy ireo. Ny toerana tokana tsy misy toeram-ponenana voajanahary ho an'ny felines dia i Madagascar, Australia ary Antarctica.
Ireo biby ireo dia biby mahazatra amin'ny faritra sasany, raha amin'ny toerana hafa kosa dia ampidirina amin'ny tontolo voafehy antsoina hoe faritra arovana izy ireo. Ny panther mainty dia mety hipetraka any amin'ny faritanin'i Amerika Afovoany, fa ny liona kosa mipetraka any Afrika voalohany.
Tena biby faritany izy ireo, na dia santionany amin'ny karazany iray ihany aza. Raha ny marina dia matetika izy ireo dia tsy miaina anaty mponina matevina, afa-tsy ny liona, izay aleony mivondrona miaraka amin'ny mpikambana 30.
Ireny biby anidina ireny dia iray amin'ireo biby vonoin'ny olona indrindra amin'ny fihazana. Ireo dia hanafika olona tsy hihevitra azy ho remby, fa hanalavitra azy amin'ny toerana misy azy ireo. Panther, lynxes ary jaguars no atahorana ho lany tamingana ankehitriny noho ny fihazan'olona betsaka.
Iray ihany ny saka, ny saka saka malaza (Felis silvestris catus), manoloana ireo karazana saka dia izay monina amin'ny faritra samihafa amin'ny tany. Ny saka an-trano dia iray amin'ireo ohatra malaza indrindra amin'ny biby ampiasain'ny olombelona mandritra ny tantara, na ny orinasan'izy ireo, na ny karazana fanampiana sy / na tombontsoa azo avy. Raha ny saka an-trano, dia heverina ho biby mpiara-miasa izy ireo, indraindray heverina ho olo-malaza amin'ny angano, ary manana firesahana lehibe amin'ny kolontsaina toa an'i Azia, Egypty ary Gresy.
Manaraka sakafo mihinana hena izy ireo, ankoatry ny sakafo omnivora indraindray, dia mpihaza biby kely izy ireo, ary mailaka sy mahay mahita ao anaty haizina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Biby totohondry
Inona avy ireo loharano angovo